Filtrer les éléments par date : mercredi, 21 juillet 2021
mercredi, 21 juillet 2021 07:12
Habakabaka : 28 tapitrisa dolara ny saran-dalana
12 minitra ny faharetan'ny dia, miakatra eny amin'ny 107km ambonin'ny tany, mihoatra 7km amin'ny 100km fetra iraisam-pirenena mamaritra ny habakabaky ny tany sy ny habakabaka tsy misy fetra, ligne Karman, mitsingevana ao anaty sambon-danitra, dia miverina midina amin'ny helon'aina ny Sambon-danitra misy ireo mpandeha.
Izany no hifaninanan'ireo mpanam-bola ankehitriny.
Tontoso omaly talata 20 jolay ny sidina nataon'i Jeff Bezos, mpanorina ny rohy famarotana entana amin'ny internet, Amazon, mpanankarena lehibe maneran-tany, niaraka tamin'ny Sambondanitra New Shepard, niandraiketan'i Blue Origin.
Nisy 4 izy ireo no niara-nisidina ny habakabaka.
Ankoatran'ny hetsika itadiavam-bola ho an'ireo maniry ny hitsangatsangana eny ambony eny, dia fanokafana ny lalam-be mikodana ho an'ny maro, hoy ity mpandraharaha ity, izao atao izao, mba ahafahan'ireo taranaka aty aoriana hanorina zava-baovao mahafinaritra.